Iimpawu zokudweba ezinobumba obunzima obuyiminyaka engama-RGM
Ngokuqinisekileyo akuyiyo imibala engqambileyo yokupenda
I-New Age Painting Knives esuka kwi-RGM ayiyiyo imifanekiso yakho eqhelekileyo yokudweba. Le mibhobho yokudweba iza kuzo zonke iindidi ezinobungqingili nezingalindelekanga, ezilungele ukudala umzobo kunye nephethini kwipende. Ingaba usasaza ipeyinti, uqala ukupenda kwipeyinti emanzi, okanye ukushicilela ngesimo, amathuba amaninzi.
Ndacinga ukuba amaqhina ayenziwe kakuhle kunye nezixhobo ezizinzileyo; amaqabunga amancinci kwaye athambileyo, aphendule kwingcinezelo efana nebhayisiki enhle. Ngezantsi ziphumo zezinye zidlala ngeenxa zonke ngamacu engenzileyo. Ndivakalelwa kukuba ndiqalise ukuhlola ubuninzi, kwaye ndikhangele phambili ukuzisebenzisa ngaphezulu.
Kuphi ukuthenga le mijelo yepeyinti
Ifoto © 2009 Marion Boddy-Evans
Ngenxa yokuba le mizobo yokudweba ihluke kakhulu, kungekhona yonke ivenkile yokuthengisela ivenkile iya kubathengisa. Buza ivenkile yakho yasekuhlaleni ukuba ngabaya kubayalela, okanye khangela enye yezinto ezinkulu zokuthengisa ezisekhompyutheni.
Ngokuqinisekileyo, ezinye iimeko ziya kusebenza kangcono kuwe kunabanye, nangona ndifumene nzima ukuchaza ukuba yeyiphi. Ukuba awuqinisekanga kwaye ungafuni ukuchitha imali kwiqebunga ongayisebenzisiyo, zama umlo ngokusika isahluko sekhadibhodi eqinile ukuze ukhangele. Akuyi kuba njengesiqhwala njengomese, kwaye uya kuhamba kwaye uyakunqabisa kwipeyinti, kodwa kufuneka akunike ixesha elaneleyo lokusebenza ukuze uzive ulolo.
I-RGM yoPafa wePowuni No. 13: Iinyawo zeFrog
Iimpawu zineenombolo kuphela, kungekhona amagama, kodwa ndazifumana ndizinika amagama. Ndiyicinga nge # 13 nje ngokuba "isicu somlenze wonyawo". (I-SO yam ithi ibukeka ngathi isithsaba kuye.) Ngokukhawuleza ibe yintandokazi yam, ukuvelisa imigca enhle yokubumba xa uyitshiza ngepeyinti emanzi (enkulu inwele kunye neengca zokuqala) kunye namachashaza amancinci xa uthetha kuphela izicwangciso kwi-tovas yakho (enkulu kwiintyatyambo ezincinane ze-Impressionist, umzekelo).
Ukuba ucinezela lonke iqela ukuba upende uze uprinte kunye nalo kwinqwelo yakho, wenze i ntyatyambo ngaphandle kwexesha. Ukuba usebenzisa umbala ohlukileyo, okanye i-original ixutywe kunye nomnye omncinci, kwinqanaba lesibini leepalali eziprintiweyo, umphumo uya kuba mnandi.
I-RGM yokuPenda kweeKhethi No. 14: Inyawo likaNewt
Umgca # 14 ufana kakhulu no # 13, ngaphandle kokuba engenazo iindidi ekupheleni. Iimpembelelo ezinikezayo zifana ncam, kodwa zincinci kwaye zibukhali.
I-RGM yokuPenda kweeKhethi No. 18: Ukutya ifom
Ngenxa yobunjani balo mzobo wepeyinti, unokuzibuza ukuba kutheni ungayi kuthatha enye ekhitshini lakho. Ewe, imo ingaba yinto efanayo, kodwa umzobo wepeyin, ndiyithetha ummese, ungcinci kunokuba udle ukudla. Ngoko i-prongs iyakhupha kwaye iphosa njengoko uqhutyana nesikhephe kwaye uyiphakamise (injenge-bristles kwi-brush do), kunokuba ube ne-static.
Inombolo ye-17 nayo ifom, kodwa incinci. Zomibini zishiya imigca emincinci kwipende emanzi, ekhangeleka kwiincinci ezintle ze- sgraffito .
I-RGM yokuPenda kweekhanelo No. 19: I-Leaf Leaf
Le ngxube ibonakala ngathi 'yinto eqhelekileyo' yecwecwe yengubo, kodwa i-slits yayo ibini. Ngokuxhomekeke kwindlela ubeka ngayo ummese njengoko uhamba ngayo ngopende, ezi zinto zishiya imigca emibini egqabileyo kwipende okanye cha. Ukuyisebenzisa ukupenda amaqabunga kwisityalo okanye kwintlobo yenkcaso kwakuye kwangoko kwafika engqondweni.
I-RGM Ipeyinti Yokupenda No. 24: Ifani
Khawucinge ukuba kulula kangakanani ukupenda ucingo lwe-picket ngalo mkhwa! Dab kwipende, dab kwinqanawa, phinda ude ucingo lwenziwa. Kwakhona kuya kusebenzela ukudweba iintyatyambo kunye neepalals ezikufutshane.
# 11 iyafana no-# 24, kodwa ngaphandle kwee-slits kwinqanaba ngalinye.
I-RGM yokudweba iCewe No. 5: I-Wave Long
Ukuba nelinye icala elibukhali kunye nelinye linye, ungasebenzisa elinye icala lommese ukusabalalisa upende kunye nelinye ukudala ukulotywa.
Iingoma ezi-10 eziphambili zeRap ze-2016
I-3 ye-Wakeboard Tower Abathetheli Bakho